अब सुन सेल्फ़िमा मात्र सिमित हुने भो, बजारमा सुनको भाउले आकाश छोयो, तोलाको १ लाख पुग्न १ हजार कम” – Sudursamaj
मुख्य पृष्ठअर्थअब सुन सेल्फ़िमा मात्र सिमित हुने भो, बजारमा सुनको भाउले आकाश छोयो, तोलाको १ लाख पुग्न १ हजार कम”
अब सुन सेल्फ़िमा मात्र सिमित हुने भो, बजारमा सुनको भाउले आकाश छोयो, तोलाको १ लाख पुग्न १ हजार कम”
Sudur Samaj | Thursday July 30, 2020	Comments
काठमाडौं,२०७७ साउन १५ । नेपाली बजारमा सुनको मोलले आकाश छोएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिर रहेको सुनचाँदीको मूल्य स्थानीय बजारमा आज पनि रूपमा बढेको छ । आमसर्वसाधारणका लागि सुन लगाउने होइन हेर्ने धातुका रुपमा मात्रै सीमित हुने अवस्था देखिँदैछ । एक तोला सुनकै मूल्य एक लाख नजिक पुग्दा सामान्य आय भएकाहरुले जिब्रो काढ्नु पर्ने अवस्था भएको हो ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला कारोबार मूल्य ९९ हजार रुपैयाँ तोकेसँगै तोलाको मोल एक लाख छुन लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामै पाँच सय रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी तेजाबी सुनको भाउ पनि बढेर कारोबार मूल्य तोलाको ९८ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । चाँदीको भाउ भने प्रतितोला १२ सय २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न बन्दाबन्दी लागू गरिएयता जेठ २५ गते एक तोला सुनको मूल्य १० हजार ४०० ले बढेर रु ८७ हजार पुगेको थियो । त्यसयता सुनको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔँस १९६२.१५ डलर कायम भएको छ । गत आइतबार सोही परिमाणको सुन १९०१.६० मा कारोवार भएको थियो । हेर्नुहोस केहि भाइरल सुन सेल्फी तस्बिर :
आज सुनको मूल्य घटेपछी सुन पसलमा सुन किन्ने मानिसको घुइँचो
१९ दिनपछि आज आइतबार घट्यो सुनको भाउ – किन्नेको लाइन !
आखिर को हुन सुन मान्छे ! ज्या’नमै ५५ तोला सुन लगाउदा पनि खासै खुसी छैन (भिडियो)
कलिलो उमेरमा दुवै मि’गौला फेल भएका पत्रकार ध्रुब बिसीको जीवन रक्षार्थ आर्थिक सहयोगको अपिल !
आज पनि १ हजार रुपैयाले बढ्यो सुनको, हेर्नुहोस कति पुग्यो तोलामा
नयाँ रेकर्ड बनाउदै आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस तोलामा कति पुग्यो